Ababhikishi bavalele uMaimane eKZN | News24
Ababhikishi bavalele uMaimane eKZN
Durban – Umholi weDemocratic Alliance uMmusi Maimane uhambo lwakhe lwaseWentworth, eningizimu yeTheku, aluqalanga kahle ngoLwesibili, ngemuva kokuba evaleleke cishe imizuzu engu-15 eThe Ark Shelter lapho eyobheka khona isimo abahlala ngaphansi kwaso.
Kukholakala ukuthi ababhikishi bavale isango elingenela kule ndawo.
Ikhansela le-DA u-Aubrey Snyman, kudingeke ukuba angenelele, wathola okhiye wabesevula isango, ukuze uMaimane, amalungu eDA kanye nabezindaba bezophuma.
Funda nalolu daba: Kulindeleke avele enkantolo osolwa ngokudlwengula umzala wentombi
Intatheli yeNews24, ebisendaweni yesehlakalo, ithi amalungu e-ANC naweDA abesho iziqubulo zamaqembu awo.
Ithimba le-DA lihambele kule ndawo ukuxoxoxisana nemiphakathi mayelana nezinkinga zokungalethwa kwentuthuko, phakathi kwezinye zezinto.